Vetikal Turret igwe Machine, Universal rocker igwe Machine - Taizheng
CNC machining n'etiti na
Vetikal TURRET igwe
nke ziri ezi na
TAJANE IN ỤWA
Nka na ụzụ OZI
ụlọ ọrụ OZI
Taizheng nkenke Machinery
Ebe ọ bụ na ya oruru, Qingdao Taizheng nkenke Machinery Co., Ltd. ka lekwasịrị anya n'ichepụta turret igwe, CNC igwe imewe, R & D na ọrụ ya na mmụọ nke afọ 20 nke magburu onwe ya. Ọ ọma gbanwee omenala n'ichepụta ụlọ ọrụ n'ime ọgụgụ isi netwọk ụlọ ọrụ nke Internet-n'obosara ahịa, na mepụtara nwayọọ nwayọọ na di ọku ahịa mpi. Enterprises rube isi na ozi nke "revering ọ bụla penny ugwo site ahịa, eke uru na akụ na ụba n'ihi na ahịa", ma na-ejere "TAANE" ika igwe ngwaọrụ ka ọ bụla ahịa na n'ibu nhazi ụlọ ọrụ, na-enye ndị ahịa na akụkụ nhazi ngwọta. The ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ
Amoosu More Video
Vetikal Turret igwe Machine
TANJAN Na China
TAJAN Na World
Ọgụgụ isi Property Protection of Taizheng Turret igwe Machine na Qingdao
Qingdao Taizheng turret igwe ikike arịa amamihe nchedo na-agụnye: nkenke igwe ngwá ọrụ e-azụmahịa software, nkenke igwe ngwá ọrụ netwọk ngosi n'elu ikpo okwu software, nkenke igwe ngwá ọrụ online ndoputa ikpo okwu software na ndị ọzọ na 16 ihe. The software nwebisiinka OA ...
Gịnị mere ihe nlereanya kwa nke Taizheng turret igwe dị iche iche?
The turret igwe nke Qingdao Taizheng nkenke Machinery Co., Ltd. na-kewara abụọ n'akụkụ: Nke 2, Nke 4, Nke 5, Nke 6 na nke 8. Isi parameters dị iche si worktable size of MX-2HG: 1067 * 230mm; MX-4HG worktable size: 1270 * 254mm; MX-5HG worktable size: 1372 * 305mm; MX -...
Taizheng CNC machining Center Series, User Nhọrọ ga-nnọọ na-emesi obi
Ịhọrọ CNC machining Center na Taipei Ọ bụrụ na i nwere mmasị na Taizheng si CNC machining center, ị ga-ejide ohere izute Taizheng. I nwekwara ike ile a lee anya na ihe ịga nke ọma akụkọ ke ukara website. Ma eleghị anya, ụfọdụ obodo ọrụ zụrụ anyị CNC nhazi center. Ị ...
Qingdao Taizheng turret igwe usoro ngwaahịa, mgbe optimizing Ọdịdị, ịgbazigharị ngwaahịa ma na-amụba nhazi. Na nso nke turret-egwe ọka igwe na-na-agụsi na aggravated ntọt nchebe. Izute mkpa nke ndị ahịa 'n'ibu akụkụ nhazi. Iji nwetakwuo tinye esenidụt mbupụ ahịa na-abanye na ụwa enterprise, ọ na ndibọhọ otuto na otuto nke ndị mba ọzọ ụlọ ọrụ.
Ele More Ahịa Nyocha
Vetikal Turret igwe Machine Price , Flat Bed Cnc Lathe Operation Manual, CNC Vetikal machining Center For Sale , Mini Milling Machine Cnc, Cnc Long Door Machining Center, CNC lathe Machine Price ,